About Us -. Ningbo YINZHOU DONGAO ridaya dhiman CO, LTD
Tan iyo markii la aasaasay sanadkii 2006, Shirkadda ayaa ku takhasusay R & D iyo wax soo saarka ee aluminium daawaha iyo daawaha zinc alaabta. Company waxa uu ku yaalaa degmada Yinzhou, magaalada Ningbo, gobolka Zhejiang. Daboolaya meel ka mid ah oo ku saabsan 13,500 oo mitir oo laba jibbaaran, aag oo ku saabsan dhismaha 10,000 oo mitir oo laba jibbaaran.
Waxaan leenahay 7 cutub oo 160T in 800T qolkii qabow dhiman mashiinada ridaya, iyo 3 cutub oo 50T in 168T qolkii kulul dhiman mashiinada ridaya. In ka badan 20 cutub oo xarumaha machining iyo lathes CNC, 2sets of khadadka nadiifinta ultrasonic. Mid ka mid ah budada line-soo-saarka daahan. In ka badan 50sets dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka processing farsamo. Sida mashiinada qodista, mashiinka shot-engeeg, mashiinka qiraan, daqiijin jireen gariirka iyo wixii la mid ah. Waxaan sidoo kale waxay leeyihiin nooc oo ah alaabtii imtixaanka sare, sida CMM, spectrometer, oo alaabta wax lagu qiyaaso pneumatic iwm
waxyaabaha lagu dhoofiyo Yurub iyo waqooyiga America. Inta badan loo isticmaalo qalabka warshadaha, baabuurta, beeraha caafimaad iyo qaybo garoonka aerospace. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheena waa OEM.
Muddo sanado ah, fikirka ah in la commited in ay bixiyaan alaabta iyo adeegyada tartan macaamiisha waa shaqada ganacsiga our, iyo "Integrity, Innovation, Professional, Win-guul" waa qiyamka asaasiga ah our. Ku tiirsan sayniska, hal-abuurnimo farsamada, iyo taabo iman kara gudaha, si firfircoon ballaariyo suuqa, horumarinta alaabta cusub. Ka dib markii sano ah dadaallada, Shirkadda ayaa ku guuleystay aqoonsiga shirkadaha badan oo caan ah gudaha iyo dibadda. Sidaas darteed, Shirkadda waxaa si isdabajoog ah soo saari karaa, caafimaad iyo stably.
Cinwaanka: Shangcheng Village, Tangxi Town, Yinzhou district, Ningbo, China